The mining industry in Zimbabwe is estimated to be worth in the region of US$4 billion. The government of Zimbabwe through its ministry of mines and mineral development expressed its intent to create and develop a US$12 billion mining industry by …
Total output figures of the major contributors to Zimbabwe's mining sector revenue are definitely going to be lower by year-end (31 December 2019) than they were in 2018. That includes gold, platinum, chrome, diamond, coal, and nickel. These minerals also happen to be the key anchors of the US$12 billion Mining Target by 2023. By…
The Zimbabwean government wants the mining sector to be worth $12bn by 2023, with gold expected to make up $4bn of that. Although the price of gold has rallied during the pandemic, Zimbabwe's revenues from the precious metal have slumped. Gold production fell 30% year-on-year to 3.98 tonnes in the first quarter of 2021, with earnings ...
Zimbabwe's economy grew and did well for a time but its mining sector began to gradually depreciate. By 2008 as the world experienced an unfortunate economic crisis, Zimbabwe sank deeper than most.
In Zimbabwe gold production is a crucial component of the nation's GDP and artisanal and small-scale gold mining (ASGM) is anticipated to be a major boost towards attaining the 12 billion by 2023 mining vision set by the president in 2019. Given the influence that gold mining has on rural communities, UNDP Zimbabwe is investing in an ...